3 Nooc oo haweenka kamid ah oo aan laga agwaayin ragga shiidka ah - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»3 Nooc oo haweenka kamid ah oo aan laga agwaayin ragga shiidka ah
Haweenka lagama helo ragga taajiriinta ah agtooda kaliya, balse waxaa sidoo kale laga ag waayin ragga saboolka ah ee aanan waxba heysan.
Inkastoo haweenka ay u muuqdaan inbadankood aanan laga ag waayin ragga taajiriinta ah, hadana ragga shiidka ah ayaa sidoo kale dhankooda heysta awood ay kusoo jiitaan dumarka.
Jacayl aan shuruud lahayn
Tani waa hweeneyda uu jeceylkeeda dhabta yahay isla markaana ninka aanan ku jecleyn faa’ido ama lacag. Gabadha noocaas ah waa mid garab taagan ninkeeda iyadoo ay jirto inay heysato xaalad dhaqaale.
Waa tan seygeeda ugu samirta culeys walba isla markaana mar walba ku dhiiri gelisa inuu ka gudbayo isla markaana guushu ay imaan doonto.
Tan saaxiibka wanaagsan ah, heysashada haweeney noocaas ah waa mid kamid ah dareenka ugu wanaagsan.
Dadka waxay u heystaan in labadiina uu jacayl idinka dhexeeyo, balse xaqiiqda ayaa ah inaad saaxiibo uun tihiin kuwaas oo aanan wadaagin wax dareen ah.
Gabadha noocaas ah waa mid aanan daneyn haddii aad heysato lacag iyo haddii kale, waxay kuu qabato ayaa ah inay ku taageerto ama gacan ku siiso mar kasta oo ay awoodo.
Tan lacagta jecel
Tani waa nooca ninka ka shubta ama kamiirta dhammaan qarashkii uu heystay taasoo wali sugeysa wax intaas kabadan oo ninka soo gala si ay usii bili-liqeysato.
Haweeneyda noocaas ah waa dhiig miirato aanan qasaarin fursad, Iyadoo ay jirto inay wax kasta kaa qaadatay oo ay ogtahay kaama tageyso ee hadane waxay istaageysaa gadaashaada waxayna sugeysaa fursado kale oo ay kugu hesho.